Saraakiisha Midowga Yurub oo soo Bandhigay Tababarka ay Siiyaan Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed (VIDEO)
December 13, 2016 – Saraakiisha ka socota Midowga Yurub ee iminka ku sugan xarunta tababarada ciidamada ee xalane ee magaalada Muqdisho, ayaa soo bandhigay xirfadaha ay baraan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed.
Midowga Yurub ayaa horaantii sanadkan mar ay kulan la qaateen wasiirka Gaashaandhigga sheegay inay sii kordhin doonaan tababarada ay siiyaan ciidamada qaranka Soomaaliya.
Jen. Diini ayaa yiri “Xiriirka ka dhaxeeya Somalia iyo Midowga Yurub waa mid wanaagsan. Waxayna nagala qayb-qadanayaan dib-u-dhiska ciidamada xoogga oo Metela bulshadeenna oo dhan. Ciidan tababar fiican leh oo Asluub iyo akhlaaq wanaagsan leh oo sidoo kalena dhawro xuquuqda shacabka Soomaaliyeed.”
Saraakiidha Midowga Yurub ayaa sheegay inay ka go’an tahay taakuleynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Wuxuuna ballan-qaaday inay kordhin doonaan tababarka ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.